Shacabka iyo Gaadiidleyda Kismaayo oo soo dhaweeyay Dayactir uu wado Maamulka KMG ah – SBC
Shacabka iyo Gaadiidleyda Kismaayo oo soo dhaweeyay Dayactir uu wado Maamulka KMG ah
Qeybaha Kala duwan ee Bulshada I yo gaadiidleyda ayaa maanta si wada jir ah u soo dhaweeyay dhaq dhaqaaqyo maamulka kumeelgaarka ah ee magaalada Kimsaayo uu ka sameeyay dib u dhiska wadada laamiga ah ee dhexmarta magaalada Kismaayo.
Wadayaasha Gaadiidka Dadweynaha ayaa sheegay in arinkan ay soo dhaweynayaan islamarkaana hadii uu sii wado maamulku howlahan dayactir ay noqon doonto mid waxweyn ka qabata burburka iyo dhibaatooyinka lagu qabo xiliyada roobabka.
“Aad iyo aad ayaan u soo dhaweyneynaa dayactirkan uu bilaabay Maamulka Kismaayo, gacanweyn ayaana ka qaadaneynaa oo faaiido ayayba noo tahay” waxaa yiri mid ka mid ah gaadiidleyda bulshada ee ka ganacsada gudaha Magaalada Kismaayo.
Waxaa kale oo arinkan ku tilmaamay mid maamul wanaag ku saleysan shacabka magaalada iyagoo sheegay in mudo kabadan 20 sano ay ugu dambeysay dayactir loogu dhaqaaqo wadooyinka Kismaayo ayna tani tahay mid soo jiidasho u leh xukuumada Somaliya gaar ahaan Maamulka kumeelgaarka ah ee ka jira iminka Kismaayo.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa muuqanayay Dhaq dhaqaaqyada dayactir ee uu maamulka KMG ah ee Kismaayo ka sameynayo gudaha Kismaayo, hadiise ay taabagasho waxay noqon doontaa mid waxweyn ka tarta bilicda guud ee magaalada Kismaayo.
Cabdi Mahad Bashiir